မိမိတို့ကွန်ပျူတာမှ Drivers များကို ဒီဆော့ဝဲလ်ဖြင့် Backup လုပ်ထားသင့်သည် ~ IT Guide Myanmar
IT Guide Myanmar
မိတ်ဆွေ ကျနော့ကိုတစ်ခုလောက်ကူညီပေးပါ ။ ကျနော်ကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှေကားထစ်ကလေးတွေလို့ သဘောထားတယ် မိတ်ဆွေတို့အားလုံး ကျနော်ကို တစ်ထစ်ခြင်းတစ်ထစ်ခြင်း နင်းပြီး အပေါ်ရောက်နိုင်သမျှရောက်အောင် တက်သွားကြပါ ။ အဲဒီလို ကျနော့်ကို နင်းပြီးတက်သွားလို့ အပေါ်ကိုရောက်သွားတာကို ကြည့်ပြီး ကျေနပ်ပီတိဖြစ်ချင်လို့ပါ....................................... ..............................................................ကိုနိုင်.................................................
ငွေရှာဖို့ အကောင်းဆုံး PTC ဆိုဒ်များ
Make Money With PTC (PTC နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ရှင်းပြထားတာလေးပါ )
How To Make Money Online Free and Easy (Online ၀င်ငွေရှာနည်း) Make Money Online
မိမိတို့ကွန်ပျူတာမှ Drivers များကို ဒီဆော့ဝဲလ်ဖြင့် Backup လုပ်ထားသင့်သည်
7:00 AM Drivers No comments
ဒါလေးကတော့ Drivers တွေကို Backup လုပ်ထားဖို့ပါပဲ..။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိမိတို့ကွန်ပျူတာကို ဝင်းဒိုးအသစ်တင်တဲ့ အခါတွေမှာ Drivers တွေပျောက်သွားတတ်ပါတယ်..။ အဲဒီလိုအခါမျိုးတွေမှာ ဒီဆော့ဝဲလ်နဲ့ Backup လုပ်ထားခဲ့ရင် ပျောက်သွားတဲ့ Drivers တွေကို အလွယ်တကူ ပြန်ထည့်လို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်..။ အဲလိုမှ မဟုတ်ပဲ Drivers Backup လုပ်မထားခဲ့ဘူး ဆိုရင်တော့ ပျောက်သွားတဲ့ Drivers တွေကို မိမိတို့ စက်ရဲ့ Model အမျိုးအစားနဲ့ အင်တာနက်မှာ ခေါင်းမူးအောင် လိုက်ရှာပေတော့ ...။ တွေ့တဲ့အခါ ရှိသလို ရှာမတွေ့တဲ့ အခါတွေလည်းရှိပါတယ်..။ အခုနောက်ပိုင်း Model အသစ်တွေဆိုရင်တော့ ရှာရတာလွယ်ပေမယ့် ဟိုးအရင်တုန်းက Model အဟောင်းတွေဆိုရင်တော့ ရှာရခက်မှခက်ပဲ..။ ဒါတွေက ကိုယ်တိုင်ကြုံဖူးမှ Drivers ရှာရတဲ့ ဒုက္ခကို သိကြမှာပါ..။ အဲလိုမျိုး အခက်အခဲတွေ မဖြစ်အောင်လို့ မိမိတို့ရဲ့ စက်ထဲက Drivers တွေကို အခုကတည်းက Backup လုပ်ထားသင့်ပါတယ်..။
Drivers Backup လုပ်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေ အများကြီးရှိပေမယ်.. ဒီကောင်လေးကတော့ ကျနော်အမြဲသုံးနေတဲ့ ကောင်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ ဒီကောင်လေးနဲ့ပဲ ကျနော်ဆိုဒ်မှာတင်ခဲ့တဲ့ Drivers တွေကို Backup လုပ်ခဲ့တာပါ..။ သုံးရတာလည်းလွယ်ပါတယ်..။ အသုံးပြုပုံကတော့ အောက်မှာပုံလေးတွေနဲ့ ဆက်ကြည့်လိုက်ပါဗျာ..။ လိုအပ်တဲ့သူများကတော့ အောက်က အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေသာ ဒေါင်းယူသွားလိုက်ပါ..။ ဗါးရှင်းအဟောင်းလေးဆိုပေမယ့် သုံးရတာ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်..။ ဒါကြောင့်ဒါလေးကို ရွေးပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ...။ 1.48 MB ပဲရှိပါတယ်...။
ဒီကောင်လေးကို အင်စတောဆွဲပြီးရင် ဒီပုံလေးအတိုင်းမြင်ရပါလိမ့်မယ်..။
ပြီးရင်တော့ အောက်ကပုံလေးအတိုင်း နံပါတ်စဉ်တိုင်း နှိပ်သွားလိုက်ပါ...။
အောက်ကပုံမျိုးပေါ်လာရင်တော့ ခဏစောင့်ပေးလိုက်ပါ..။ Drivers တွေကို ပြန်သိမ်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်..။
အပေါ်ပုံအတိုင်းပေါ်လာရင် Backup လုပ်တာပြီးသွားပြီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် Close ကိုနှိပ်ပြီး ပိတ်လိုက်လို့ ရပါပြီ..။ Desktop မှာအောက်ကပုံအတိုင်း ပေါ်လာရင် တခါတည်း Winrar နဲ့ စာအုပ်ချုပ်ပြီး သိမ်းလိုက်ပါတော့....။ သိမ်းတဲ့အခါမှာလည်း တနေရာထဲမှာ မသိမ်းပဲနဲ့ ကွန်ပျူတာရဲ့ Partition တွေထဲမှာရော USB Pendrive တွေထဲမှာပါ ၂နေရာ၊ ၃နေရာ ခွဲပြီး သိမ်းသင့်ပါတယ်..။ တစ်နေရာထဲမှာ သိမ်းခဲ့ရင် ပျောက်သွားတဲ့ အခါ အခက်တွေ့မှာဆိုးလို့ နေရာတွေခွဲပြီး သိမ်းထားသင့်ပါတယ်..။ Winrar နဲ့ ဖိုင်ချုပ်နည်း၊ ဖိုင်ဖြည်နည်းကိုတော့ မသိသေးတဲ့သူများအတွက် ကျနော်ဆိုဒ်ရဲ့ ညာဘက်အခြမ်းမှာ Winrar ခေါင်းစဉ်နဲ့ တင်ပေးထားပါတယ်..။
Drivers Backup လုပ်ပြီးလို့ ရလာတဲ့ ဖိုင်ရဲ့ အထဲမှာ အောက်ပါအတိုင်း မြင်တွေ့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်..။ Original Drivers ခွေမှာဆိုရင်တော့ Drivers software အစုံပါတဲ့အတွက် 2.5 GB ကျော်ရှိပါတယ်..။ ဒီကောင်လေးနဲ့ Drivers Backup လုပ်ပြီးပြန်သိမ်းတဲ့အခါမှာတော့ စက်ရဲ့အဓိကလိုအပ်တဲ့ Drivers တွေကိုပဲ ပြန်သိမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် MB တစ်ရာကျော်လောက်ပဲ ရှိပါတော့တယ်..။ Winrar နဲ့ ချုပ်လိုက်ရင်တော့ သုံးပုံတစ်ပုံလောက် သေးသွားပါတယ်..။
အားလုံးပဲ လုပ်တတ်ကိုင်တတ်၍ အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ..။
အောင်အောင်(မကစ) ရဲ့ ဘလော့ခရီးသည်လေးအား အားပေးနေကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်.. လိ်ုခြင်တာကို ကြိုက်နှစ်သက်သလို ယူဆောင်သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်.... အဆင်မပြေတာများရှိခဲ့ပါက...cbox မှာ ပြောခဲ့ကြပါနော်..
<<< မန်ဘာဝင်ပြီး... Fb Like ခြင်းဖြင့် အားပေးကြပါနော် >>>
အောင်အောင်(မကစ) ပိုင်ဆိုင်သော နေရာလေးများကိုလာလည်ကြပါ။ www.herostown.blogspot.com
How To Make Money Online Free and Easy (Online ၀င်ငွေရှာနည်း)
နည်းပညာ နဲ့ တော့ မသက်ဆိုင်ပါ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ မျက်မှောက်ခေတ်မှာ ကိုယ့်မျက်စေ့အောက်မှာ အဲဒီလိုမျိုးတွေ မြင်နေတွေ့နေရတာများလာတော့ သည်းမခံနို...
အွန်လိုင်းပေါ်မှာငွေရှာနည်း အပိုင်း(၂) google adsense အကြောင်း
Google Adsense Google..AdsenseဆိုတာGoogleကုမဏ္ဍီကနေသတ်မှတ်ချက်အရည်အသွေးနဲ့ပြည့်မှီတဲ့ဝက်ဆိုဒ်ဘလော့များအတွက် ပေးထားတဲ့ ...
3D Album Commercial Suite 3.30 All Style
3D Album Commercial Suite 3.30 အွန်လိုင်းမိတ်ဆွေများ “ အားလုံးမင်္ဂလာပါ” ဒီနေ့တော့ 3D ဖိုတိုဆလိုက်ရှိုးတွေ ၊ Precentation တွေ ၊ Wedding...
Kanaung Converter ကောင်းလေးပါ။
ဒီ Converter လေးကတော့ အရမ်းသုံးရတာလွယ်ပါတယ် အထူးသဖြင့် DTP လုပ်ငန်းသမားတွေအတွက်ပါ။ဥပမာ မိမိက Innwa နဲ့ရိုက်ထား တယ် အစိုးရရံ...
မာတိကာ Aပိုင်း ၁ (Blog လုပ်ရန် လိုAပ်တာများ ပြင်ဆင်ခြင်း) o Font Download And Install o Keyboard Download And Install o Type Zawgyi-one ...
Browser အားလုံးအတွက် Keyboard Shortcuts 47 မျိုး ****************************** ****** မင်္ဂလာပါ..... Browser အားလုံးအတွက် Keyboard Shortcu...
ကာရာအိုကေ သီချင်းတွေ ကိုယ်တိုင်လုပ်မယ်
ကိုယ်တိုင် ကာရာအိုကေ သီချင်းတွေလုပ်နိုင်မယ့် Software လေးပါ။ - သီးချင်း မှာ ဓာတ်ပုံတွေ စာသားတွေ ထည့်နိုင်မယ်။ -အဆိုတော်အသံဖြုတ်ပြီး....
Aurora 3D Presentation 13.03.06 + keygen
Aurora 3D Presentation is the most easy to use 3D interactive presentation creation software; Quickly Design Business Presentation, Touch S...
USB မှ Window တင်နည်း & Window7/ 8 ISO Images ဖိုင်လ်များ
ဟိုနေ့က သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်မေးနေလို့ ( USB Drive ကနေ Window 8 တင်တတ်ချင်လို့ပါတဲ့) ကျနော်ကိုယ်တိုင် ရှင်းပြနေရင် အချိန်ကုန်ပြီး နာ...
ကွန်ပျူတာဝေါဟာရအခေါ်အဝေါ်များအတွက် သီးသန့်ထုတ် အာသောက ကွန်ပြူတာ-အဘိဓာန် ( 617 KB )
Tuesday, June 25, 2013 Pyae Phyo (MMiTD) 1 comment ကွန်ပြူတာသမားတော်တော်များများကိုဆောင်ထားသင့်တဲ့ ကွန်ပြူတာ-အဘိဓာန်လေးတစ်ခုမျှဝေပေး လ...
အသစ်တင်တိုင်း မိမိမေး(လ်) ထဲကိုauto posts ရောက်ဘို့ Subscribe လုပ်နိုင်ရန် သင့်မေး(လ်)ပေးခဲ့ပါ
ခုအပေါ်ကပုံလေးကိုနှိပ်ပြီး အသင်းဝင်တယောက်ဖြစ်အောင်လျှောက်ထားလိုက်ပါ ။
Xiaopan OS ဖြင့် WPA/WPA2-PSK ပတ်စဝေါ့အား အလစ်သုတ်...
မြန်မာပြည်သို့ FREE CALL, FREE SMS
I Phone Setting နှင့် app များကိုမြန်မာလိုပြောင်းမ...
Nokia ဖုန်းတွေကို မြန်မာဖောင့်ထည့်နည်း
Nokia ဖုန်းများအတွက် မြန်မာဖောင့် သွင်းနည်း (1) | ...
သင့်ကွန်တာပျူကို Smart TV ကြီးတွေလို Hand Sensorြ...
သင့် Facebook ကိုယူသုံးသွားတယ်လို့ထင်ရတာကို ဘယ်လို...
G510ကိုRootမ ဖောက်ဘဲမြန်မာစာပေါ်အောင် လုပ်နည်း
Easy Driver Pack 5.3.2.1 (AIO) (x86 & x64)
RAR File နဲ့ ZIP File တွေ password မသိတော့ရင် အလွယ...
အရမ်းမြန်တဲ့ Browser တွေဖြစ်လာဖို့
Internet မှာ လိုချင်တဲ့ Serial Key ကိုအတိအကျ ရှာဖေ...
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့Website တွေကို apkပြောင်းမယ်..
key logger ရန်ကကင်းဝေးအောင် ကွန်ပျူတာမှာပါတဲ့ ကီးဘ...
Copy ကူးခွင့် မပေးတဲ့ Websites တွေကို ကူးကြည့်ကြမယ...
Movies ဇာတ်လမ်းများ ကြည့်လို ဒေါင်းလိုပါက
EPSON Printer Series ၆ မျိုးအတွက် 6-in-1 Driver
အိုင်တီနဲ့ ပက်သက်ပြီးအသုံးဝင်တဲ့ website များ စုစည...
Error Repair Professional လေးအကြောင်း
ကွန်ပျူတာ အမှိုက်တွေကို ရှင်းလင်းပေးမယ့် နည်း ( ၅ )...
FACEBOOK ကနေ FREE CALL ခေါ်ဆိုပေးနိုင်တဲ့ SAYTYA FR...
Galk မှာ ကိုယ့်ကို ဘယ်သူတွေ block လုပ်ထားသလဲ... စမ...
Format Factory 3.1.0 mp3/mp4 လုပ်ကြည့်ရအောင်
Flaming Pear : Flood ဖိုတိုရှော့ ပလပ်အင် ပုံနှင့်တ...
iphone,iPad နှင့် ipod touch များတွင် ဇော်ဂျီဖောင်...
USB မှ Window တင်နည်း & Window7/ 8 ISO Images ဖိ...
windows7& 8 ကို Software မသုံးဘဲ USB Memory Stic...
Window xp, vista,7ကို USB stick နဲ့ window တင်မယ...
WinToFlash ကိုသုံးပြီး USB Drive ဖြင့် Window တင်န...
CD Rom Missing ကို ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပီးရှင်းမယ်
Internet Download Manager 6.17 Build5Full (Relea...
Android OS တွေကို Root နိုင်တဲ့ Baidu Root Tool v ...
Website ၄၅ ခုရဲ့ ပို့စ်တွေကို App တစ်ခုတည်းနဲ့ ဖတ်...
Samsung Galaxy ဖုန်းများကို အလွယ်တကူ Root လုပ်နည်း...
Notepad ဖြင့် Keylogger တစ်ခု ရေးသားနည်း ( မြန်မာလ...
လုံးဝဖျက်လို့မရတဲ့ Folder တွေ Command Line ထဲကနေတည...
Browser တွေရဲ့ Cache, Cookies, History ကိုဘယ်လိုရှ...
Internet Download Manager 6.17 Build 3+Patch
ကွန်ပျူတာမှာ PDF ဖိုင်တွေကို စာအုပ်ဖတ်သလို စာရွက်လ...
Multiple Bootable Operating Systems တွေကို USB Sti...
PC များအတွက် VZO ဗားရှင်းအသစ် Conferendo v6.4
ကွန်ပျူတာမလိုပဲ ဖုန်းကနေတိုက်ရိုက် print ထုတ်လို့ရ...
Windows7 တင်ပြီးတဲ့အခါ Driver တွေကို ဘယ်လို Restor...
မိမိတို့ကွန်ပျူတာမှ Drivers များကို ဒီဆော့ဝဲလ်ဖြင့...
ဘလော့တခုမှ လိုခြင်သော ပုံ..ဒီဇိုင်း..တွေရဲ့ လင့်.....
Blogger များအတွက် Link တစ်ခု တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ Li...
Software ပေါင်း 4000 ကျော်ရဲ့ Key ကိုတွေရှာပေးနိုင...
Facebook မှာ နာမည် နဲ့ Password ပြောင်းမယ်
Windows Phone တွင် Font ထည့်သွင်းပုံ
သင့် Network ထဲက တစ်ခြားကွန်ပျူတာကိုလေးသွားအောင် ဘ...
သင့် Facebook ကိုတစ်ယောက်ယောက်ယူသုံးနေတယ်လို့ သံသယ...
Proxy Server အကြောင်း ထူးရှယ် Basic EBook ( မြန်မာ...
Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe (Full Ver...
ပျက်ဆီးသမျှ Data ပြန်ယူပေးမည့် ဆော့ဖ်ဝဲ
Make Free Phone Calls PC to Mobile or Landline
မြန်မာလို နည်းပညာစာအုပ်တွေကို အွန်လိုင်းကနေဘယ်လိုရ...
Chinese to English Dictionary ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခု...
ကွန်ပြူတာ Hard Disk မှ PS II Game စက်ဆီသို့ EBook ...
Facebook Bug ( Hacking Facebook with 1 SMS Only )
Hiren’s boot CD အား USB မှ အသုံးပြုခြင်း။
DriverPack 12.3 Full+SamDrivers 13.6.363
နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ FB Group တွေမှာ မိမိလိုချင်တာေ...
Unlock Root Pro 4.1 ကို Full Version ရပါပြီ..
G-mail or G-talk Account ဘယ်လိုခိုးမလည်း...
100% သေချာတဲ့ facebook အကောင့်ဖွင့်နည်း
Facebook က ကျွန်တော့်ကို ဘယ်တော့မှ Phone နံပါတ် မေ...
Gtalk အကောင့် ကို တခုထက်မက ခွဲဖွင့်ချင်ရင်
WEP လိုင်းကိုဖေါက်မယ် ဒီတစ်ခါပုံနဲ့ 
Wifi Hacking ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက် အခြေခံကျက...
facebook မှာ မြန်မာ လိုဖြစ်ဖြစ် အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်ဖြစ်...
Debit Card/Bank Card မလိုပဲ Paypal အကောင့်တစ်ခုပြု...
Internet Send Free SMS messages mobile
Free call internet by Mobile number
Hacking လေ့လာချင်သူများ သိစေချင်ပါသည်
RIM မှထွက်ရှိမည့် အဆင့်မြင့် Blackberry ဖုန်းသစ်
Sony ရဲ့ ပထမဦးဆုံး Xperia Z Ultra အမည်ရှိ Phablet...
Yamicsoft Windows 8 Manager v1.1.3 + Keygen
USB မှ Virus ၀င်ခြင်းကို 100% ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ US...
(အချစ် + လက်ထပ်ခြင်း + တိတ်တိတ်ပုန်း + ဘ၀) (1)
Android မြန်မာလို Apk (3)
Android နှင့်ဆိုင်သော (5)
Blogger Widget (3)
Chinese to English Dictionary (1)
CPU-Z apk (1)
Download လုပ်နည်း (1)
DriverPack 12.3 (1)
EPSON Printer Series ၆ မျိုးအတွက် 6-in-1 Driver (1)
Error Repair Professional (1)
Facebook fiee call (1)
Facebook နှင့်ပါတ်သက်သမျှ (1)
Flash Song (1)
Free Phone Calls PC to Mobile (1)
Graphic Software (2)
i OS နှင့်ပါတ်သက်သမျှ (1)
Inter Net (2)
iOS နှင့်ပတ်သက်သမျှ (1)
iPhone နှင့်ပါတ်သက်သမျှ (1)
IT သတင်း (5)
Multiple Bootable (1)
Myanmar System FONT Convertor (1)
Nokia ဖုန်းနှင့်ပတ်သမျှ (2)
PDF Reader (2)
Phone Application (4)
Photo Slide Show (1)
PRO EMAIL HACKING TOOL 2012 (1)
Root tool (11)
Root Tools (5)
Root လုပ်နည်း (9)
Social Media Image Maker (1)
USB Drive ဖြင့် Window တင်နည်း (4)
USB Multiboot (1)
USB Virus Scan (1)
Viber နှင့်ပတ်သက်သမျှ (2)
Viber နှင့်ပတ်သက်သမျှ (1)
Video တည်းဖြတ် (1)
virus remover (1)
Vroot (မြန်မာလို ဆောဝဲ) (1)
VZO အသစ် (1)
Wifi ဆိုင်ရာ (3)
Windows 8 Manager (1)
Xiaopan OS (1)
ကွန်ပြူတာ အဘိဓ္ဓာန် (1)
ညီနေမင်း-(နည်းပညာ) ကွန်ပြူတာသင်ခန်းစာများ (6)
နိုင်ငံတကာ ရုပ်သံလိုင်း (1)
မြန်မာပြည်သို့ FREE CALL (1)
မြန်မာလို IT နည်းပညာ Ebook (3)
မြန်မာလို နည်းပညာ Ebook (4)
ဝင်းကမ္ဘာကျော် (နည်းပညာမှတ်တမ်း) (5)
အခမဲ့ စာအုပ်ဆိုဒ် (1)
အွန်လိုင်း မြန်မာစာလုံးပေါင်း သတ်ပုံကျမ်း (1)
အာဇာနည်နေ့ သမိုင်းကြောင်း (1)
Computer and Mobile Technology
Copyright © IT Guide Myanmar | Powered by Blogger